Bus Maltese antitra
Fahamendrehana amin'ny kodiarana
Faly izahay miasa amin'ny iray amin'ny lehibe indrindra sy maoderina maoderina, Mini Bus, ary Chauffeur Driven Car Fleet.
Anarana minisitra voalohany amin'ny fitaterana Malta
Ny anaranay dia natsangana tamin'ny fanoloran-tena ho amin'ny fenitra avo, ny serivisy, ary ny fifantohan'ny mpanjifa.
70 Taona Fanofana Fitaovana
Hatramin'ny 1944, nomena fiadanan-tsaina ho an'ny mpanjifa mila tolotra fitaterana any Malta izahay.
MANDEHA HIARAKA AMIN'NY PARAMOUNT
Paramount Coaches dia orinasa mpitondra fiara fitaterana any Malta izay manolotra solo-ko an-tserasera, Mini Bus, ary fiara mpitondra fiara mpitondra fiara ao Malta hatramin'ny 1944. Ny fampanantenantsika dia toe-tsaina matihanina izay mifantoka amin'ny filàn'ny mpanjifa mba hahazoana antoka ny vahaolana azo antoka.
Mirehareha isika amin'ny fandefasana fiaramanidina lehibe iray sy lehibe indrindra any Malta mba hanomezana tolotra avo lenta ny Sekoly, ny Oniversite, ny Ambasady, ny Hotely, ny DMC, ny Tour Operators, ny Governemanta ary ny Manampahefana ao an-toerana.
Ny mpanjifanay dia misafidy hatrany ny fiadanan-tsaina omenay azy ireo. Manatontosa izany isika amin'ny alalan'ny fahalalantsika tsara ny fitaterana any Malta sy ny toetrantsika amin'ny fitantanana ireo trangan-javatra mety hipoitra.
Amin'ny alàlan'ny tambajotranay ao an-toerana, afaka manome tolotra serivisy azo antoka sy mora vidy isika manerana an'i Malta ho an'ireo hetsika orinasa, mpandeha an-tongotra fitaterana an-dalamby, fiarandalamby fiantsonan'ny seranam-piaramanidina ary fitaterana any an-tsekoly.
TRANSPORT SEKOLY & COLLEGE
Isika no orinasa lehibe indrindra fitaterana fiara fitaterana an-tsekoly any Malta izay manome fifamoivoizana ho an'ny mpianatra amin'ny sehatra ho an'ny besinimaro, tsy miankina, vahiny ary ny fiangonana.
hamaky bebe kokoa→
Manana fitetezana marobe avy amin'i Malta sy Gozo izahay mamorona traikefa tsy manam-paharoa amin'ny harena voajanahary sy ny tantaranay.
Manolotra fandaterana serivisy amin'ny seranam-piaramanidina sy serivisy eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Malta sy hotely / resabe manerana an'i Malta sy Gozo
FANDIKAN-TENIN'NY FITSARANA CRUISE LINER
Manolotra ny famindrana avy amin'ny sambo fiaramanidina ary manondro ny fifindrana avy amin'ny trano sy toerana manodidina ny nosy Malta.
CORPORATE & ASA hafa
Ny famindrana ny fitaterana solontenan'ny delegasiona, ny famindrana fiantsonan'ny seranam-piaramanidina, ary ny filàna fitsidihana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny logistics, ny valiny haingana ary ny fahamendrehana azo antoka.
Serivisy fitaterana azo antoka sy matihanina
Raha te-hanontanianao na hanao famotorana ianao, dia aza misalasala miresaka amin'ny mpiasa matihanina. Hanampy anao amin'ny famaliana ireo fanontaniana mety ho azonao sy amin'ny fanatanterahana ireo fepetra takian'ny fitaterana.
Ireo mpanazatra baolina dia nanome tolotra fitaterana logistika ho an'ny Fikambanan'ny Football Football hatramin'ny 2002.
Ireo ekipa nekena ho an'ny firenena sy iraisam-pirenena dia samy nanompo tamim-pahombiazana ny Mpanazatra Paramount:
ARMENIA, BOLGARIA, KYPSTRA, DEMOKRASIKA, FINLANDA, GÉORGIA, GRESY, INTER, ISRAEL, LATVIA, LUXENBOURG, MACEDONIA, MANCHESTER UNITED, IRENE NORTHERN, NORWAY, PORTUGAL, SWEDEN,
Fikambanana Football Football
"Ny Travel Language EF dia mampiasa ny Paramount Garages ho an'ny ankamaroan'ny zavatra ilaina amin'ny fitaterana mandritra ny taona 15. Ny fangatahana nataonay dia nahitàna tamba-be tamina tambajotra be dia be ary tamin'ny alalan'ny serivisy iray izay azo antoka sy azo itokisana foana. Ny kalitaon'ny mpanazatra sy ny fihetsiky ny mpamily dia maneho izany. "
Miaraka amin'ny famindrana vao haingana nataon'ny sambo nihoatra ny 300 Amerikanina sy ireo firenen-kafa avy any Tripoli, Libya ao ambadik'izao, te-haka fotoana kely aho ary hanehoako ny fankasitrahako manokana sy aminao sy Paramount Coaches Ltd. Ho fanampiana anao am-pitiavana mandritra ny famindrana sy ny ezaka manaraka manampy ireo evacuees.
Ny fahavononanao hifanaraka akaiky amin'ny mpiasa ao amin'ny Masoivoho momba ny dingana famindrana dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fomba mahomby sy mahomby ireo evacuees afaka niala sy nandray ny fanampiana ilaina. Amin'ny ankapobeny, ny fahaiza-manaonao sy ny fahazoanao ny fandehan-draharahan'ny fiaramanidina dia mihemotra miaraka amin'ny toetr'andro dia tena ankasitrahana. Tsy afaka nanampy ireo evacue izahay raha tsy nahazo fanohanana sy fanoloran-tena avy amin'ny Paramount Coaches Ltd. "
Atoa Douglas W. Kmiec - Ambasadora Ho an'ny Etazonia
"Garages manan-danja indrindra ao Mosta, manompo ireo sampana isan-karazany ao amin'ny Anjerimanontolo miaraka amin'ireo serivisy fitaterana sahaza, nandritra ny taona 35 farany.
Nandritra io fotoana io dia nahita ity orinasam-pitaterana azo antoka ity izahay ary azo antoka fa mpanjifa. Na ho an'ny mpanazatra, ny minibus, ny fiara mpamonjy entana dia ny fahamoram-potoana sy ny fikarakarana ny serivisy no tsara indrindra azon'ireo nosy.
Ankoatra ny vidin'ny fifaninanana, ireo mpanafaka am-pahamendrehana sy fahamoram-potoana dia nahita an'i Paramount izahay ho mpiara-miombon'antoka manan-danja amin'ny fanamafisana ny fifanarahana amin'ny fampidinana ireo tolotra tsara indrindra ho an'ireo mpianatra vahiny sy mpitsidika. "
MALTA UNIVERSITY TONGA COMPANY
INONA NO LAZAIN'NY OLONA?
Ny taona 70 nanaovanay fanabeazana dia nanome antsika traikefa goavana eo amin'ny sehatry ny fitaterana any Malta, mamela antsika hanome fiadanan-tsaina sy serivisy ho an'ny mpanjifanay.
Fanoloran-tena ho amin'ny fahamendrehana
70 Taona Fanatanjahantena
Isan'andro dia andro vaovao ho antsika ary miasa mafy tokoa isika mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifantsika na aiza na aiza.
Malta - Eoropa.
Sokafy 24 / 7
Ny politikantsika momba ny fahasalamana sy fiarovana
Copyright © 2017 - Noforonin'i Eyelead + Eyetech . Zo rehetra voatokana
Ity tranonkala ity dia mampiasa mofomamy: Fantaro bebe kokoa.